मोरङमा भेटिएको यस्तो अनौंठो माछा, स्थानिय चकित! (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > मोरङमा भेटिएको यस्तो अनौंठो माछा, स्थानिय चकित! (भिडियो सहित)
मोरङमा भेटिएको यस्तो अनौंठो माछा, स्थानिय चकित! (भिडियो सहित)
admin September 11, 2020 भिडियो, रोचक, समाचार	0
मोरङ । नेपालमा एक दुर्लभ माछा फेला परेको छ ।
प्रदेश नम्बर १ को मोरङ जिल्लामा अनौंठो माछा भेटिएको हो । यहाँको बेलबारी ६ स्थित नहरमा अनौठो प्रकारको माछा भेटिएको भन्दै स्थानिय चकित भएका छन् । सुनसरी–मोरङ सिँचाई आयोजनाको नहर अन्तर्गत सोमबारे र बनौल बिचको बिचपैनीमा बुधबार त्यस्ता २ वटा माछा देखिएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीय बयोवृद्ध अग्रज र माछा पाल्ने तथा यसको व्यवसायमा संलग्नहरुले समेत विगतमा यस्तो माछा कहिल्लै नदेखेको बताएका छन् । अहिले उक्त माछालाई त्यहाँका स्थानीयले जिवितै सुरक्षित राखेका छन् ।
फेला परेका माछाका विषयमा जीवशास्त्री वा संरक्षणविदहरुलाई अवलोकन गराएर जाकारी लिन चाहेको स्थानिय टेकनाथ शर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।
बिदेशी भुमीमा अप्ठ्यारोमा रहनु भएका नेपालीहरूका लागि मन्त्री भट्टराई दिए यस्तो खुशीकाे खबर
बेलुकि सुतेकाहरू मध्ये उज्यालो नहुदै बगायो १८ जिन्दगी !
कृष्ण र रुपाले डष्टबिनमा भेटिएका बच्चालाई छोरा बनाए ! सबैले शेयर गरौं (भिडियो हेर्नुस)
विस्फोटमा पर्नुअघि नै यस्तो मार्मिक थियो राम सिंहको अन्तिम फेसबुक स्टाटस